Suzuki Myanmar ties up with AYA Bank to offer7years auto loan program for prospective customers – LYCA COMMUNICATIONS
Suzuki Myanmar ties up with AYA Bank to offer7years auto loan program for prospective customers
Date: September 21, 2018Author: Rahul0Comments
Yangon – September 21, 2018 – Suzuki (Myanmar) Motor Company Limited on Friday announced that it has tied up with AYA Bank to offer7years auto loan program called ‘AYA Super Suzuki Finance’ that will facilitate prospective customers of Suzuki with auto loan at attractive terms from September 25 2018.
‘AYA Super Suzuki Finance’ program will make the customers more convenient when purchasingapremium brand new car of Suzuki, which the car models that available under this loan program as ‘Suzuki Ciaz’ that offersaluxurious and dignified sporty designed sedan and ‘Suzuki ERTIGA’ as ultimate multi-purpose3rows,7seats sports vehicle.
Under the ‘AYA Super Suzuki Finance’ program, instalment payments up to7years will be available in case of 25 percent down payment. In addition,adown payment will be starting at only 20 percent with instalment payments up to5years. There will be no service charges and sales commission at the customers’ side.
“This program offers different options for the customers for buying Suzuki’s cars easily. Customer can choose the period of instalment for up to7years. Service charges and sales commission to AYA Bank will be paid by Suzuki and the dealers,” said Keiichi Asano, Managing Director of Suzuki (Myanmar) Motor Company Limited.
“Our joint program with AYA Bank helps people with competitive rates and flexible payment options because we want our customers to feel trust and enjoy the smooth process for their payment when buying Suzuki’s cars through this loan program,” Asano said.
Suzuki is ready for sales and services to bring the highest satisfaction for the customers. Currently, Suzuki continues and develops the dealer network, with 37 showrooms and service centres nationwide; offer fast, effective and good quality services by well-trained service staffs. Besides that, Suzuki has developed quick spare parts delivery with an adequate cost.
For more information, please visit the official Facebook page of Suzuki Myanmar Motor Co., Ltd. https://www.facebook.com/suzukimyanmarmotorcoltd
အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များအတွက် ဆူဇူကီးနှင့်ဧရာဝတီဘဏ်တို့ ပူးပေါင်းကာ(၇)နှစ် ကားအရစ်ကျပေးချေမှုအစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – ဆူဇူကီး(မြန်မာ)မော်တာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဧရာဝတီဘဏ်နှင့်ပူးပေါင်းကာ အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များအတွက် (၇)နှစ် ကားအရစ်ကျပေးချေမှု ‘AYA Super Suzuki Finance’ အစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့ မှ စတင်ကာ ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာ သည်။
‘AYA Super Suzuki Finance’ အစီအစဉ်သည် ဆူဇူကီး၏အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံး ကားများဖြစ်ကြသည့် Sport Designဖြင့် အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံဆီဒင်ကား ‘Suzuki Ciaz’ နှင့် ဘက်စုံသုံး (၇)ယောက်စီး ခုံသုံးတန်းပါ ‘Suzuki ERTIGA’ တို့ကို ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
AYA Super Suzuki Finance’ အစီအစဉ်အရ မော်တော်ကား တန်ဖိုး၏(၂၅)ရာခိုင်နှုန်း လက်ငင်းပေးချမှုအတွက် အရစ်ကျပေးချေမှုကာလ အများဆုံး(၇)နှစ်အထိ ပေးထားသည်။ ဖြည့်စွက်မှုအနေဖြင့် ကနဦးလက်ငင်းငွေပေးချေမှု(၂၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အရစ်ကျပေးချေမှု ကာလ(၅)နှစ်မှ စတင်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဤအစီအစဉ်မှတဆင့် ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် အခြားဝန်ဆောင်ခနှင့် အရောင်းကော်မရှင်ခများ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
“ဒီအစီအစဉ်ဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ ဆူဇူကီးကား ဝယ်မယ့်သူတွေအတွက် လွယ်ကူသက်သာစေပါတယ်။နောက် ဒီအစီအစဉ်ကနေ ကားဝယ်ယူသူအနေနဲ့ အရစ်ကျ ပေးချေမှုကာလကို(၇)နှစ်အထိ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်”ဟု ဆူဇူကီး(မြန်မာ) မော်တာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ Keiichi Asano က ပြောကြား သည်။
“ဧရာဝတီဘဏ်နဲ့အတူ ပူးပေါင်းမိတ်ဆက်တဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကနေ ဆူဇူကီးကား ဝယ်ယူမယ့် ဖောက်သည်တွေကို ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ အရစ်ကျပေးချေမှု စနစ်ကို ခံစားသိရှိစေခြင်းအားဖြင့် ဝယ်ယူမယ့်ပြည်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေဆုံး ဈေနှုန်းနဲ့ လွယ်ကူသက်သာတဲ့ ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေနဲ့ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်”ဟု Mr. Asano ကဆက် ပြောသည်။
ဝယ်ယူသူများစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရှိစေမည့် အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆူဇူကီး မှအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ လက်ရှိအားဖြင့် ဆူဇူကီးသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အရောင်းပြခန်းပေါင်း(၃၇)ခုနှင့် မြန်ဆန်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင် မှုများပေးနိုင်ရန် အထူးသင်တန်းများပေးထားပြီးသော ဝန်ထမ်းများ၊ service စင်တာ များနှင့်အတူ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကွန်ယက်ကိုလည်း အစဉ်မပြတ်တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် ဆူဇူကီးသည် ကားဝယ်ယူသူများရေရှည်ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန် ဈေးကွက် အဆင့်မီ စစ်မှန်သောအရည်အသွေးမြင့် အပိုပစ္စည်းများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ထပ်မံတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆူဇူကီး(မြန်မာ)မော်တာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ Facebook စာမျက်နှာ http://www.facebook.com/suzukimyanmarmotorcoltd တွင် လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
AYA BankAYA Super Suzuki FinanceCarJapanLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMotorMyanmarMyanmar PR AgencyPRPress ReleasePublic RelationsSuzuki MotorSuzuki MyanmarTeam LycaVehicleYangon
Previous Previous post: Harvey Law Group (HLG) offers an exclusive investment opportunity in South East Asia with the launch of Tommie Hotel Hollywood eligible to the US Green Card Program
Next Next post: Vivo V11 AI Smartphone Makes Debut in Myanmar Promising Perfect Shots and Immersive Design